ကိုကို၊ ဦး၊ ဒေါက်တာ - ဝီကီပီးဒီးယား
ကိုကို၊ ဦး၊ ဒေါက်တာ
မိဘအမည် ဦးဘိုကြီး + ဒေါ်တင်တင်
ပညာအရည်အချင်း M.B.B.S. ဘွဲ့၊ DPH (Edin), DTM & H (Eng:) နှင့် FRCP (Edin)ဘွဲ့
အလုပ်အကိုင် စာရေးဆရာ၊ ဆရာဝန်
သားသမီး သားသမီး ၆ ဦး
ရရှိခဲ့သည့်ဘွဲ့တံဆိပ်များ အမျိုးသား စာပေဆု (သုတပဒေသာ အသုံးချ သိပ္ပံဆု)
၁ ဒေါက်တာ ဦးကိုကို (၁၉၂၉-)
ဒေါက်တာ ဦးကိုကို (၁၉၂၉-)[ပြင်ဆင်ရန်]
ဒေါက်တာ ဦးကိုကိုကို အဘ ဦးဘိုကြီး၊ အမိ ဒေါ်တင်တင်တို့မှ ပုဂံမြို့တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ ငယ်စဉ်က ပခုက္ကူမြို့တွင် နေထိုင်ခဲ့ပြီး ဝက်စလီကျောင်း၌ ပညာ သင်ကြားခဲ့သည်။
၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင် ပခုက္ကူ အစိုးရ အထက်တန်းကျောင်းမှ ၁ဝ တန်း အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ၁၉၅၃ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် ဆေးသိပ္ပံမှ M.B.B.S. ဘွဲ့ ရရှိခဲ့သည်။ ၁၉၅၆ ခုနှစ်တွင် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ အီဒင်ဘာရာ တက္ကသိုလ် DPH (Edin), DTM & H (Eng:) နှင့် FRCP (Edin) ဘွဲ့များ ရရှိခဲ့သည်။
ဒေါက်တာ ဦးကိုကို၏ ဇနီးသည်မှာ ဒေါ်ခင်ညွန့်ညွန့် ဖြစ်ပြီး သားသမီး ၆ ဦး ရှိသည်။ ဆရာသည် ၁၉၅၃ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန် ပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီး၌ လက်ထောက် ဆရာဝန်၊ အင်းစိန်ခရိုင်၌ လက်ထောက် ကျန်းမာရေး ဆရာဝန်၊ ခရိုင် ကျန်းမာရေး ဆရာဝန်ကြီး အဖြစ် အမှုထမ်းခဲ့သည်။ ကျန်းမာရေး ဦးစီး ဌာနတွင် လက်ထောက် ညွှန်ကြားရေးမှူး အဖြစ် အဆင့်ဆင့် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ဆရာသည် ဆေးဝါးဗေဒ ဆိုင်ရာ လေ့ကျင့် သင်ကြားရေး တာဝန်ကို ရန်ကုန် ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) နှင့် (၂) တို့တွင် သရုပ်ပြ အချိန်ပိုင်း ကထိက၊ ပါမောက္ခ တာဝန်များဖြင့် ပို့ချခဲ့သည်။ ကျန်းမာရေး ဦးစီး ဌာနတွင် ညွှန်ကြားရေးမှူး (ရောဂါ နှိမ်နင်းရေး) အဖြစ် နောက်ဆုံး တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ၁၉၆၉ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ နယူးဒေလီမြို့ရှိ အရှေ့တောင်အာရှဒေသကြီး၏ ရုံးချုပ်တွင် လူမှုရေး ကျန်းမာရေး အကြံပေးအဖြစ် ပြောင်းရွှေ့ အမှုထမ်း ခဲ့သည်။
ဆရာသည် ၁၉၈၁ ခုနှစ်မှ စ၍ ၁၉၉၄ ခုနှစ် အထိ ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာရေး အဖွဲ့ အရှေ့တောင် အာရှ ဒေသ ဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားရေးမှူး အဖြစ် ရွေးချယ် တင်မြှောက်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ ၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် ထိုတာဝန်မှ အငြိမ်းစား ယူခဲ့ပြီး ၁၉၉၆ ခုနှစ် အထိ ဂျီနီဗာမြို့ရှိ ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာရေး အဖွဲ့ချုပ်၏ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံတကာ ဆေးပညာ နှီးနှော ဖလှယ်ပွဲများ၊ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲများ၊ ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ ကြီးမှူး ကျင်းပသော ညီလာခံများသို့ အကြိမ်ကြိမ် တက်ရောက်ခဲ့သည်။
ဆရာသည် ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်တွင် ကျောင်းတက် ပညာ သင်ကြားနေစဉ် 'တက္ကသိုလ် မဂ္ဂဇင်း'၊ 'ဆေးသိပ္ပံ မဂ္ဂဇင်း' များတွင် ကဗျာ ဆောင်းပါး၊ ဝတ္ထုတိုများ ရေးသားခဲ့သည်။ 'ဆေးသိပ္ပံ မဂ္ဂဇင်း' ကို တည်းဖြတ် ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
ဆေးပညာရပ် ဆိုင်ရာ သုတေသန လုပ်ငန်းများကို လက်တွေ့ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး၊ သိပ္ပံနှင့် သုတေသန ဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးများ၊ စာတမ်းများကို ဆေးဂျာနယ်များတွင် အင်္ဂလိပ် ဘာသာဖြင့် ပုဒ်ရေ ၁၂ဝ ရေးသား ပုံနှိပ် ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ဆရာသည် မြဝတီ၊ ငွေတာရီ၊ ဆေးပညာ မဂ္ဂဇင်း၊ ကျန်းမာရေး ပညာ မဂ္ဂဇင်းများနှင့် အကောက်ခွန် ဂျာနယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ ဆေးဂျာနယ်၊ ဇီဝက ဆေးကျန်းမာရေးတို့တွင် ဆောင်းပါး ၂၅ ပုဒ် ရေးသားခဲ့ပြီး၊ ဆက်လက် ရေးသားလျက် ရှိသည်။
ဆရာသည် ၁၉၉၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် ကျန်းမာရေး အသိ ပညာ ဖွံ့ဖြိုးရန် ရည်ရွယ်၍ "ရောဂါကင်းဝေး သက်ရှည်ရေး" စာအုပ်ကို ရေးသားပြုစုပြီး စာပေလောက စာအုပ်တိုက်မှ ထုတ်ဝေခဲ့ရာ ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် အမျိုးသား စာပေဆု (သုတပဒေသာ အသုံးချ သိပ္ပံဆု) ကို ချီးမြှင့် ခံခဲ့ရသည်။
ယခုအခါ ဆရာ ဒေါက်တာ ဦးကိုကိုသည် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး အဖွဲ့၏ ဂုဏ်ထူးဆောင် ညွှန်ကြားရေးမှူး ဖြစ်သည့်အပြင် မြန်မာနိုင်ငံ ဆေးပညာရှင်များ အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် ကျန်းမာရေး ပညာပေး တာဝန်များကို ဆက်လက် ထမ်းဆောင်ရင်း တဖက်မှလည်း ကျန်းမာရေး ပညာပေး စာပေများကို ရေးသား ပြုစုလျက် ရှိသည်။
၁။ ရောဂါကင်းဝေး သက်ရှည်ရေး ၁၉၉၈
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကိုကို၊_ဦး၊_ဒေါက်တာ&oldid=456719" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၉ ဧပြီ ၂၀၁၉၊ ၀၄:၀၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။